अष्ट्रेलिया जानचाहने विद्यार्थीका लागि एक्स्पर्ट सेमिनारः थापा – Arthik Awaj
अष्ट्रेलिया जानचाहने विद्यार्थीका लागि एक्स्पर्ट सेमिनारः थापा
‘विद्यार्थीको विश्वास जित्नु नै एक्स्पर्टको सफलता’
By आर्थिक आवाज २०७६ भाद्र २१ गते शनिबार १५:१९ मा प्रकाशित
प्रवन्ध निर्देशक, एक्सपर्ट एजुकेसन, पोखरा
एक्स्पर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेस पोखराको आयोजनामा भदौ २३ गते सोमबार ‘ग्राण्ड अष्ट्रेलियन एजुकेशसन सेमिनार’ हुँदैछ । न्युरोडस्थित सिटी स्क्वायरमा हुने ग्राण्ड सेमिनारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर सञ्चालक रेमशकुमार थापासँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
एक्स्पर्टले ग्राण्ड अष्ट्रेलियन एजुकेशसन सेमिनार आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
एक्स्पर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेस पोखराको आयोजनामा भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ९) मा पोखराको न्युरोडस्थित सिटी स्क्वायरमा ‘ग्राण्ड अष्ट्रेलियन एजुकेशसन सेमिनार’ हुँदैछ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थी तथा अभिभाबकलाई लक्षित गरी सेमिनार आयोजना गरिएको हो । अष्ट्रेलियाको शैक्षिक नीति, परिवर्तित भिजा पोलिसी, बसाइँसराई, काम तथा रोजगारीका अवसर लगायतका बारेमा पनि विद्यार्थीलाई यथार्थ जानकारी गराउने उद्देश्यले सेमिनार आयोजना गरिएको हो ।
सेमिनारका लागि लक्षित समूह कुनकुन हुन् ?
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थी तथा अभिभाबक सेमिनारका लक्षित समूह हुन् । अष्ट्रेलिया जान चाहने र त्यहाँको शिक्षा प्रणााली लगायत विविध विषयमा जानकारी लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सेमिनार निकै उपयोगी हुनेछ । पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रबाट सेमिनारमा विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् ।
सेमिनारमा कसकसको प्रतिनिधित्व रहन्छ ?
सेमिनारमा एक्स्पर्टका अध्यक्ष बद्री अर्याल र एक्स्पर्ट मेल्वर्नका निर्देशक सरोजकुमार शर्मा लगायतको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहनेछ । सेमिनारमा अष्ट्रेलियाका १३ वटा युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधिहरुसँग विद्यार्थीले प्रत्यष भेट्न पाउनेछन् ।
एक्स्पर्टका विशेषताहरु के–के छन् ?
अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुको प्रमुख रोजाईमा एक्स्पर्ट परेको छ । सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी हामीमार्फत अष्ट्रेलिया जानु भनेको विद्यार्थीले हामीप्रति गरेको माया र विश्वास हो । दक्ष काउन्सिलरबाट हामीले परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलियाको सिड्नी, ब्रिस्वेन, मेल्वर्न, एडिलेड, गोल्डकोष्ट, पारामाटामा पनि एक्स्पर्टका शाखा सञ्जालहरु छन् । नेपालका प्राय मुख्य शहरमा हाम्रो सञ्जाल छ । स्तरीय परामर्श, व्यावसायिक परामर्शदाता तथा पारिवारिक वातावरणमा सेवा प्रदान गर्नु नै हाम्रो विशेषता हो ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि यहाँहरुको सक्रियता देखिनुको कारण के हो ?
सामाजिक उत्तरदायित्वलाई हामीले स्थापनादेखि बहन गर्दै आइरहेका छौं । एक्स्पर्ट फाउण्डेसनमार्फत हामीले सामाजिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । विभिन्न विद्यालयमा स्टेसनरी तथा पोशाक वितरण, दन्त शिविर, भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग लगायतका गतिविधिहरुमा हाम्रो सक्रियता छ । नेपालको खेलकुदलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि हामी लागेका छौं । विशेष गरी क्रिकेट खेलमा हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । यो अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनेछौं ।